I COMPANY ISEMTHETHWENI AID
INKAMPANI ISEMTHETHWENI AID
Abemi (physical abantu) siya kunikela isemthethweni uncedo kuyo nayiphi na isixa — ukususela elula luhlomle kuwo ukuze olugqityiweyo isisombululo neenkqubo zomthetho iingxaki ngaphandle intatho-nxaxheba Umxhasi we-nkqubo.
Organizations (isemthethweni abantu), siya kunikela isisombululo ngqo idibene isemthethweni iingxaki kwaye corporate inkonzo, okuquka zonke kunokwenzeka isemthethweni iinkonzo kwi-ngokupheleleyo.
Bonke abasebenzi bethu ingaba eziqinisekisiweyo specialists kunye ephakamileyo isemthethweni imfundo nomsebenzi amava ngendlela ezahlukeneyo organizations isemthethweni likarhulumente (iinkundla, abatshutshisi, Imicimbi yangaphakathi imizimba), eziya constantly ekuphuculeni izakhono zabo hayi kuphela yi-neyokusebenza isombulula iingxaki zabo Abaxhasi, kodwa kanjalo xa uthatha nesabelo elinolwazi isemthethweni iiforam kunye neenkomfa.
HONESTY KWAYE INGQIQO
A isemthethweni umbutho wathabatha phezu umthetho ukuziqhelanisa ka-extorting imali evela zabo abathengi, ixesha ngalinye idala imaginary iingxaki ezifuna enye intlawulo, ngaphandle postpone ixesha isisombululo okhoyo isemthethweni iingxaki.
Yethu esemthethweni iinkonzo ayisayi kufuna ukuba unnecessary iindleko. Ingxaki lwenziwa strictly ngokunxulumene isivumelwano kwi inikeza neenkqubo zomthetho iinkonzo. Ingxelo malunga umsebenzi kuwo iyafumaneka kwi imfuneko.
Eyona siseko umsebenzi wethu -«umsebenzi eneneni, akukho nto eninzi», oko kukuthi, xa ithatha isemthethweni ingcebiso uqala ukufunda ukuba kuyenzeka ukusombulula ingxaki Yakho, ukuba kunokwenzeka, uza kufumana cacisa iingcebiso kwaye algorithm ka-iintshukumo kuba isigqibo umbuzo Wakho.
Ngomhla elokugqibela ye-isivumelwano kwi inikeza neenkqubo zomthetho iinkonzo, bethu lawyer ngokulula kwaye zichaza ngokucacileyo Kuni oko kuza kwenziwa, ngubani ixesha elimiselweyo kwaye yintoni isiphumo bonke wavuma iintshukumo.
KUNOKWENZEKA INGOZI LAWYER-INTANETHI LUHLOMLE KUWO